I-studio yegadi ekhanyayo, ebanzi, epholileyo - I-Airbnb
I-studio yegadi ekhanyayo, ebanzi, epholileyo
Ibekwe ngokufanelekileyo kulwandle lwaseTerrigal kunye neziko lokuthenga i-Erina. Isitudiyo se-11 yindawo ezolileyo, ekhaphukhaphu kwaye ephangaleleyo, enendawo yokuhlala encanyathiselwe kwikhaya lethu kwisiqingatha sehektare yegadi kunye nengca.
Ifanelekile kwikhefu lempelaveki, phakathi evekini okanye ukubaleka ixesha elide.
Ukubonelela ngendawo efanelekileyo yeholide yolwandle apho unokuphumla okanye ukonwabele izinto ezibonwayo, imbonakalo entle kunye nezinto ezinomtsalane. Uya kuba kwindawo esembindini phakathi kweSydney (ukuya kuthi ga kwi-60- 90 imizuzu) kunye nengingqi yewayini yaseHunter Valley (malunga neeyure ezi-2).
Isitudiyo sinebhedi yokumkanikazi (enengubo yombane) indawo yokuphumla kunye neTV, itafile yokutyela kunye nezitulo kunye nendawo eninzi yokugcina. Ukuba ibhedi yokuhamba iyafuneka , inokusekwa kwi studio.
Igumbi lokuhlambela liqulathe ishawa, ingamampunge kunye neWC.
Uyakonwabela ukusetyenziswa kwekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye nomatshini wokuhlamba
Kukho iTV ehlakaniphile eneFoxtel ekhethiweyo kunye neencwadi kunye nemidlalo yebhodi edityaniswa neWiFi yasimahla.
Umjikelo we-air conditioning obuyela umva ugcina indawo yakho ishushu okanye ipholile.
Kukwakho indawo ebanzi, yabucala kunye negqunyiweyo yangaphandle ene-Weber bbq kunye nokusetwa kwangaphandle
Siyayithanda indawo yethu eselunxwemeni kunye nomoya waseTerrigal. Sikhuthaza abatyeleli abanqwenela ukwazi ukuba le ndawo kunye noNxweme olubanzi lweCentral kufuneka lunikeze ukuqala ngokundwendwela indawo ye-intanethi-NSW Central Coast Visitor Information.
Siyakonwabela ukudibana nabantu kwaye siya kufumaneka ukuze sincede iindwendwe zethu kangangoko sinakho, nangona kunjalo siyabuhlonipha ubumfihlo babo. Siyavuya ukwabelana ngolwazi lwethu lommandla obandakanya iindawo zokutyela, iikhefi, ukuhamba ematyholweni, iilwandle kunye nezinye izinto ezininzi ezikhangayo ezinikezelwa ngummandla.
Siyakonwabela ukudibana nabantu kwaye siya kufumaneka ukuze sincede iindwendwe zethu kangangoko sinakho, nangona kunjalo siyabuhlonipha ubumfihlo babo. Siyavuya ukwabelana ngolwazi…
Inombolo yomthetho: PID-STRA-3562